City University Osaka - Study in Japan. Ardayda International
gaabinta : OCU
aasaasay : 1880
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Osaka City
Qor at University Osaka City
University Osaka City u dabaal-guuradii 135th ee 2015. Hadda waa jaamacadda ugu weyn ee dadweynaha ee Japan, la 8 kulliyadaha iyo 10 dugsiyada graduate, qurbaanka bachelor, sayidkiinna iyo phD koorsooyin kala duwan oo nidaamo. Waqtiga ay aasaaska, duqa magaalada Osaka, Hajime Seki, na siiyey howlgalka gaar ah: "Jaamacad cusub waa in aanay noqon dayashada ah oo ka mid ah jaamacadaha qaranka; waa u adeegi baahida muwaadiniinta; cilmi baaris asalka on dhaqanka, dhaqaalaha, iyo bulshada magaalada Osaka iyo isgaadhsiin natiijada dadka magaalada. "Isaga oo la tusay waa weli hayay sharaf noo by ilaa maantadan la joogo aad.
Dhibaatooyinka jeeda Osaka waa dhibaatooyin isku mid ah magaalooyinka adduunka oo soo food saartay. Halkan OCU, waxaad yeelan doontaa fursad ay ku helaan waxbarasho iyo cilmi baaris ku sameeyaan in aad ka doodid doonaa in xal dhibaatooyinka sida isbedelka cimilada ka heli, sahayda tamarta nadiif ah, caafimaadka magaalooyinka, iyo masiibooyinka dabiiciga ah, dhibaato oo kaliya lagu xallin karo by isku aragtiyo caalami ah iyo kuwa maxalliga ah.
aqoonsiga dugsiga Tani ayaa soo saaray laba Laureates Nobel, Professor Walls Yoichiro Nambu in Physics iyo Professor Shinya Yamanaka ee Medicine. In ruuxa this ganacsiga, OCU ujeedadiisu tahay in ay kobciso dadka qaadan kartaa on doorka hogaaminta bulshada, cilmi baaris deeqsi ah iyo asalka ah oo heer caalami ah oo ay noqoto kibirka magaalada.
OCU aad bixisaa jawi caqliga kala duwan oo deeqsi ah, taas oo aad awood u yeelan doonaan in ay si xor ah uga wada hadlaan oo horumariyaan aad fikrado, halka samaynta isticmaalka goobaha fiican waxbarasho iyo cilmi maadooyinka oo ah shabakad tacliinta gudaha iyo kuwa caalamiga ah oo xoog leh. Waxaan soo dhaweyneynaa dhammaan oo idinka mid ah inay yimaadaan oo nagu soo biiraan in xalinta dhibaatooyinka maanta iyo mustaqbalka.
Madaxweynaha University Osaka City
Si loo gaaro howlgalka caalamiga ah ee korinta a jaamacadeed ah ee talantigii ka xoogbadan, iyo raadinta runta.
Si aad jaamacad in muwaadiniinta faani karo baxsan
Si aad u fiirsan magaalada sida maado waxbarasho oo ay helaan xal caqli dhibaatooyinka ay gaar.
Si aad dib u siin doonaa midhaha hawlaha waxbarashada iyo cilmi baarista iyo magaalada iyo shacabkeeda iyo ka qayb qaataan horumarinta labada bulshada deegaanka iyo bulshada caalamiga ah.
Si aad jaamacad in ku dhow yahay inuu ku citizens-
Si aad u fuliyaan ku dhaqanka iyo dhaqanka oo magaalada Osaka, sida jaamacad ah magaalooyinka ku salaysan.
Si kor loogu qaado waxbarashada deeqsi ah iyo hal abuur leh iyo cilmi, iyo daryeelka caafimaadka ee caadiga ah sare.
Si loo hagaajiyo hawlaha kala duwan ee magaalada, sida dhaqanka, dhaqaalaha, warshadaha, iyo daryeelka caafimaadka, wada jir ah ula muwaadiniinta, iyo isku dayaan in ay ogaadaan xaaladda a Xoolo run.
Kuliyada Suugaanta iyo Human Sciences
Kuliyada Human Life Science
Graduate School of Suugaanta iyo Human Sciences
City University Osaka (OCU) ka kooban yahay siddeed iyo toban kulliyadood dugsiyada graduate. OCU raad bilowga ay u 1880 aasaasay Institute of Tababarka Ganacsiga Osaka, xarunta waxbarasho ganacsiga iyo warshadaha ee Osaka. Institute waxaa loo baxshay sida ay horumariyo iyo koray, noqoshada Dugsiga Ganacsiga Osaka City (1889), Osaka City Commercial College (1901), Osaka University of Commerce (1928), iyo ugu dambeyntii University Osaka City ee 1949. In April 2006, University Osaka City waxaa dheeyey sida shirkad ah jaamacadaha dadweynaha.
In la dhiso OCU sida jaamacadaha ugu horeeya ee degmada Japan ee, Dr. Hajime Seki, Duqa of Osaka, soo kala aragti. Jaamacad cusub waa in aanay noqon dayashada ah oo ka mid ah jaamacadaha qaranka; waa u adeegi baahida muwaadiniinta; waa in la sameeyo cilmi baaris asalka on dhaqanka, dhaqaalaha, iyo bulshada magaalada Osaka iyo isgaadhsiin natiijada dadka magaalada. Intii ay taariikhda 70-sano, University Osaka City ayaa si daacad ah loo hoggaansamo aragtidan aasaasay by samaynta arrimaha magaalooyinka mid ka mid ah walaac ay bartamaha.
Ma rabtaa wada hadlaan University Osaka City ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Osaka City on Map
Photos: City University Osaka rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Osaka City
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Osaka City.